Xaaf Ducaale Xariguu hayo Xoolo kuma Jiraan (Qormo kooban) - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Xaaf Ducaale Xariguu hayo Xoolo kuma Jiraan (Qormo kooban)
December 8, 2017 admin587
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Xaaf ayaa dhawaan heshiis la galay Maamulka Ahlu sunna gobolada Dhexe, Heshiiskaan ayaa soo maray heerar kala duwan, waxaana labada dhinac fadhiyo ku yeesheen Nairobi, Jabuuti iyo Muqdisho. Ahlu sunna oo ka mid ahayd saddexdii garab ee wax ka dhistay Galmudug 2015 ayaa xiligaas qaatay xildhibaano, wasiiro iyo Jagooyin kale. iyadoo la isku afgartay in ugu badnaan 11 xildhibaan la siiyo qeyb ka mid ah Ahlu sunno oo diiday in wax la wada dhisto.
Maamulka Galmudug oo ku fadhiya awood qeybsiga beelaha ayaa waxaa ku midoobay 11 beelood oo midba saami uu ku qanacsan yahay ka helay dhismaha Galmudug, Waxaana kooxda Ahlu sunna garabkii dhuusamareeb dhowr jeer la isku dayey in wada hadal lala galo si loogu qanciyo in ay maamulka Galmudug ka mid noqdaan. iyagoo inta badan shuruudo adag hordhigayey masuuliyiintii garwadeenka ka aheyd shirarkaas.
Galmudug oo laba sano jirsatay ayaa waxaa awoodda la wareegay Madaxweyne Xaaf Ducaale 03 May 2017, isagoo barlamaanka Galmudug ka codsaday in la siiyo 100 Maalmood oo ku soo xero galiyo Ahlusunada Dhuusamareeb. Mudadaas oo ay u suurtagali waysan, Dhanka kale urur goboleedka IGAD oo aqbalaad ka heysta dowladda federaalka ayaa beesha caalamka ka codsaday in ay IGAD hoggaamiso wada hadalada Galmudug iyo Ahlu sunna, iyagoo dhaqaale farabadan uga qaadanaya beesha caalamka.
Qorsha IGAD waxaa la waday siyaasiyiin ka soojeeda Galmudug, waxaana ugu dambeyn wafdi labada dhinac ah oo ka kooban 55 xubnood la geeyey Jabuuti, inkastoo markii hore lagu waday siminaar, hadda Madaxweyne Xaaf Ducaale iyo rag kooban oo qorsha la waday ayaa si gaar ah u karkarinayey heshiis lala galo Ahlu sunna. Taas oo aysan wax ka ogeyn xildhibaanadii Galmudug ee jabuuti tagay. waxaana halkaas ka muuqatay in Xaaf wax gaar ah watay.
Sideed bari oo ay joogeen kadib waxaa jabuuti lagu saxiixay heshiis aan la shaacin qodobada uu ka kooban yahay, taas oo shaki galisay Bulshada Galmudug, Wafdigii ayaa kusoo guryo noqday Soomaaliya gaar ahaan Magaalada Muqdisho, Waxaa maalinamadii Arbacada lagu saxiixay Madaxtooyada Qaran Heshiis ka kooban 14 Qodob, waxaana mar kaliya laga war helay Xaaf oo Galmudug, Gacantana u galiyey koox 3 magaalo oo ay maamusho ka dhigtay xabsi kor ka furan. Waxaa la baalmaray dastuurkii ay heshiiska ku ahaayeen bulshada Galmudug.
Qaladaadka ku jira heshiiskan
in la abuuray jago aan ku jirin dastuurka Galmudug, taas oo hadii xataa la sharciyeeyo abuuri doonto khilaaf joogto ah, innagoo cashar ka qaadanaynaa khilaafka soo laablaabta ee mar kasta dhex maray Ra’iisulwasaaraha iyo Madaxweyna Soomaaliya tan iyo 2000.
Barlamaanka Galmudug oo ay soo xusheen Beelaha Galmudug lagu dari doono Barlmaan Kooxeed, taas oo ka dhigaysa in Galmudug gacanta loo galiyo koox aan ogoleyn kala duwanaansho fikir. taas dhaxalsiisa Bulshada Galmudug in ay ku noolaadaan xabsi kor ka furan.
Beel ama koox kasta lagu dhiiri galinayo in magaalo xirto, kadibna lagu qanciyo waxa ay rabaan. taas oo rajada Galmudug ka tuureysa jar dheer.
Waxa dood la galiyey Astaantii iyo dastuurkii Galmudug.
Barlamaanka Galmudug oo ah hey’adda Sharci dajinta oo awoodooda uu la wareegay Xaaf Ducaale.
Gabagabadii Heshiiskan ayaa marka indho caafimaad qaba lagu eego waxaa muuqata in Xaaf Ducaale Xaraashay Galmudug, isagoo siistay inuu bilo sii fadhiyo kursiga Madaxweynanimada. taas oo ay suurtagal tahay isaga laftigiisa uusan calfan maadaama uu isku dhiibay koox.
Duqa Muqdisho oo Daahfuray Dibu Dhiska Boondheere